अर्नाको खोरभित्र बाघ पस्याे, दुई अर्ना मृत भेटिए - Kohalpur Trends
अर्नाको खोरभित्र बाघ पस्याे, दुई अर्ना मृत भेटिए
१३ पुस, चितवन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा अर्ना राखिएको इन्क्लाेजर भित्र बाघ पसेको छ । बाघको आक्रमणबाट दुई वटा वयस्क अर्ना मृत भेटिएका छन् ।
निकुञ्जको पुरानो पदमपुरमा रहेको खुल्ला खोरमा सोमबार दुई वटा अर्ना मृत अवस्थामा फेला परेको निकुञ्जका सूचना अधिकारी लोकेन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार विद्युतीय तारवार (इलेक्ट्रिक फेन्स) ले खुल्ला खोर बारिएको छ । उक्त बारमा रुखको हाँगा झरेर केही दबेको ठाउँबाट उफ्रेर बाघ भित्र प्रवेश गरेको अधिकारीले बताए ।
खोरभित्रै रहेको बाघलाई निकुञ्जका प्राविधिकहरुले नियन्त्रणमा लिएर निकुञ्जको भित्री (कोर) इलाकामा छाडेका छन् । सरकारले २०७३ सालको माघ १२ देखि २८ गतेसम्म १६ दिनको अन्तरालमा कोशी टप्पु आरक्ष र सदर चिडियाखाना ललितपुरबाट १५ अर्ना चितवन ल्याएको थियो । कोशी टप्पुबाट दुई भाले र १० पोथी गरी १२ तथा सदर चिडियाखाना ललितपुरबाट एक भाले र दुई पोथीसहित तीन अर्ना स्थानान्तरण गरी ल्याइएको थियो ।
तीमध्ये ६ वटा अर्ना यसअघि नै मरेका थिए । स्थानान्तरण गरी चितवन ल्याएपछि हालसम्म ३ भाले, दुई पोथी र एक हालै जन्मिएको लिंग पहिचान नभएको गरी ६ वटा बच्चा जन्मिएका छन् । अब निकुञ्जमा बच्चा र बयस्क गरी १३ वटा अर्ना रहेका छन् ।
अहिले सौराहास्थित पुरानो पदमपुर क्षेत्रमा ३० हेक्टरको क्षेत्रफलमा खुला खोर बनाएर अर्ना राखिएको छ । संख्या बृद्धि गरी झुण्डमा हिँड्न थालेपछि भने बाघले आक्रमण गर्न नसक्ने भएकाले त्यसपछि मात्रै खुलाखोरबाट जङ्गलमा छाड्ने निकुञ्जको योजना छ ।
Previous Previous post: विद्यार्थीको व्यंग्य–लोकतन्त्र स्वाहा ! बयलगाडा स्वाहा !
Next Next post: बेलायतबाट आएका ५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि